HIGHLAND COWS: BEERAHA BALLAARAN EE FICILKA - XOOLAHA
Markay noqoto xoolaha, waxaan mar walba ka fekereynaa sida loo fududeeyo qiimaha iyo kharashka waqtiga si loo helo natiijo fiican mustaqbalka.
Laakiin badanaa natiijo fiican ayaa ah natiijada qoysaska aadka u daran, marka noocyo farsamooyin quudin ah, daryeel gaar ah iyo dayactir gaar ah ayaa lagu dabaqayaa xayawaanka.
Waxaa si gaar ah u adag in la qiyaaso sida xayawaanka, sida lo'da, lagu hayn karo iyada oo aan lahayn kormeer dheeraad ah, quudin iyo waxyaabo kale?
Dhab ahaan, waxaa suurtagal ah, kaliya tani, waxaad u baahan tahay inaad doorato mid gaar ah, oo la yiraahdo Highland. Waxaan kuu sheegi doonnaa kuwan xayawaanka ugu cimriga badan iyo kuwa daba joogga ah.
Waxaan helnay sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan sifooyinka ee taranka.
Ka hor intaadan bilaabin inaad ku sharaxdo lo'da sare, waxaad u maleyneysaa inaad weli u baahan tahay inaad cadeyso waxa nuxurka ah ee beeraha ballaaran iyo taranka xoolaha.
Marka laga duwo baahsan, markii ujeedada ugu weyni ay tahay in la helo wax soo saarka beeraha ama dhirta sii kordhaya, taas oo dhaqaale iyo ilo dhaqaale lagu soo jiidanayo, waxsoosaarka ballaadhan micnaheedu maaha wax kharash ah.
Xaaladdan oo kale, si kor loogu qaado waxsoosaarka beeraha, waxay kordhin kartaa oo keliya kiniinka beeridda, ama, haddii kale, meesha daaqa.
Xoolo kale oo aad u badan oo loogu talagalay xayawaanka, taas oo ku lug leh faa'iido la'aanta faa'iido la'aan - waa isticmaalka noocyada gaarka ah ee xayawaanka ee leh meelo ballaaran oo lagu hayo iyo taranta.
Goobjoogaha sifooyinka hidaha ee asalka u ah ee taranka
Caleenta lo'da sare waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn. Waddanku waa Scotland, halkaas oo xoolo-dhaqatada asalka ah ay si toos ah u soo saari karaan xayawaannada ugu badan ee aan xannaanada lahayn, oo ku habboon xaaladaha cimilada ee cimilada ee waqooyiga waddanka.
Saldhigga hidaha ee qaansarradani waxay ka samaysan yihiin cawska cawska ah ee Celtic, dabeecadaha iyo astaamaha kuwaas oo muddo dheer aaney ku dhicin xulashada.
Inkasta oo ilma-yahannada Woqooyi-Bari ay yihiin xayawaan badan, ayaa la isweydiiyay, waa wakiil ka mid ah yaryar.
Sannado badan, sanadkaan wuxuu calaamad u noqday dalkiisa iyo dalal kale oo khibrad leh.
Xaqiiqdu waxay tahay in xayawaannada la midabaysan yahay waxay kala duwan yihiin timo aan caadi ahayn iyo timo dheer iyo ganaaxyo aan caadi ahayn, iyo sidoo kale cabbirka yar ee jirka.
Iyada oo arrimahan oo dhan, dabeecadda ayaa abaalmarin ku abuurtay geeso aad u ballaadhan oo weyn, kuwaas oo ay si madaxbanaan awood ugu yeeshaan in ay naftooda ka ilaaliyaan ugaarsado duurka. Dad badan ayaa kufadhiyaan Highland mini oo aan xitaa wax soo saarka hilibka boodhka ah, laakiin waxaa loogu talagalay raaxo madadaalo ah oo ka baxsan banaanka aan caadiga ahayn.
Maxay yihiin sifooyinka iyo sifooyinka gaarka ah ee Highland mini-lo'da?
Sidii hore ayaannu u sheegnay, ilamahaan ma aha mid nala yaqaan, inkastoo xaaladaha goobaha cimilada dhexe ay ku habboon yihiin taranka iyo dayactirka.
Muujinta ugu muhiimsan iyo kala-duwanaanta ee qadar-yar-yar ee digirta ee Highland waxsoosaarka hilibka hilibka lo'da.
By habka, quudinta degdeg ah kuma haboonaan dhammaan, beeralayda xirfad leh ma ku talinaynaa isticmaalkeeda. Isla mar ahaantaana, dadaal aad u yar oo ka timaada xoolahan, waxaad heli kartaa hilibka cuntada dhabta ah ee tayo sare leh.
Tani waxay si fudud u cuni kartaa daaqa. Intaa waxaa dheer, xataa xayawaanka duurjooga ah ma heli karaan cunto, lo'da Highland weli waxay maareysaa miisaanka, maaddaama xitaa geedo iyo cawska aan dhab ahayn ay noqon karaan cuntadooda.
Xaqiiqdu waxay tahay in dalkooda ku yaala xayawaankaas ay ku nool yihiin goobo buuro ah, halkaas oo ay ku yartahay cunto aad u yar, dabayl sarreeya, heerkul hooseeya iyo roobab badan.
Sidaa daraadeed, u dhowow beerta hoyga, halkaas oo xayawaanku ay ku dhuubi karaan hoyga si gaar ah loogu dhisi doono inta lagu jiro roobka ama barafka, waxay noqon lahaayeen kuwo ku filan iyaga. Iyo xaddiga cuntada ay cunaan xayawaanku waxay ka yar tahay tan idaha caadiga ah.
Sidaa daraadeed, xataa xayawaanka aadka u sarreeya ee xayawaanka Highland mini-sac ayaa lagu hayn karaa hal qalin, sababtoo ah waxay ka maqnaan doonaan cuntada iyo dhulkii aagga ayan waxyeelayn.
Maadada meel bannaan waa in la siiyaa iyaga oo dhan sanadka oo dhan, iyo tani waxay ka welwelsan tahay oo kaliya ma aha wakiillo ka mid ah jilicsan daahir, laakiin sidoo kale Beelaha. Dabcan, jiilaalka ayaa waxay u baahan yihiin inay ku quudiyaan wax yarsi kastaba ha ahaatee, haddii aagga daaqa ee iyaga waa mid aad u ballaaran oo ka mid ah duurka, ka dibna xataa waa la illoobi karaa.
Inta lagu jiro xilliga jiilaalka, waxaa laga yaabaa in loo baahdo oo keliya xayawaanka yaryar, gaar ahaan marka la yareeyo tilmaamayaasha heerkulbeega si heerkul aad u hooseeya. Inkasta oo, geedi socodka dhalmada ee lo'da sare waa mid sahlan, uma baahna waxqabadyo dheeraad ah oo aad u dhif ah ayaa keena dhibaatooyinka xayawaanka.
Horumarinta xoolaha yaryar ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah cowska naftooda, oo ka khayr badan cidina ma daryeeli doonto weylaha yaryar.
Faa'iidada faa'iido ee ay tahay in la abuuro waa in la fiiriyaa
Faa'iidada koowaad ee ugu muhiimsan ee caanahan waa in aysan u baahnayn dhismo gaar ah oo loogu talagalay dayactirka. Iyada oo ay joogaan goobo ballaaran oo ah beeraha ama ugaadhsiga, waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad ku rakibtid cirbadaha gaarka ah ee wareega iyo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, cabitaanada ay ku jiraan santuuq.
Sidaa daraadeed, kharashka dayactirka iyo daryeelka waxaa si deg deg ah loo yareynayaa. Habka aan caadi ahayn ee taranka Woqooyi waxay fududeeyeen sifooyinka soo socda:
Adkeysiga awoodda iyo awoodda loo leeyahay in lagu adkeeyo xaaladaha cimilada ugu xun.
Nidaamka difaaca ee 'Highlands' ayaan saameyn ku yeelan fayraska iyo cudurrada fayraska ah ee dabiiciga ah.
Dabcan, tani waxay ugu wacan tahay xiriir la'aanta xayawaanka kale ee xayawaanka ah kuwaas oo cuduradan la kala qaado, iyo marka labaad, asalka hiddaha iyo astaamaha caanaha: timo dheer iyo qaro weyn, iyo sidoo kale cabbirka is haysta ee jirku ka caawiyo inay iska caabiyaan roobka iyo dabaysha, waxay gacan ka geystaan ​​heerkulbeegga.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in Dhulalka Woqooyi ay ugu habboon yihiin cimilada qaboobaha waqooyiga qabow, iswaafajintooda waxay u oggolaaneysaa in uu ku fido meelo kala duwan.
Maanta, lo'dadan yaryar ayaa horay u joogsaday in ay noqdaan wax yaab leh xataa xitaa gobollada dhexe ee Ruushka, iyo xitaa intaa ka sii badan oo ah dhulkeeda waqooyiga.
Caanuhu wuxuu leeyahay nolol sare.
Marka laga soo tago xaqiiqda ah in dhererka qulqulka sare ee digriiga ah uu si aad u xoog badan u jilicsan yahay, isla markaana aan wax dhib ah lahayn, hal haween ayaa jiil cusub dhalin karta 25 sano oo noloshooda ah.
Sidaa darteed, marka laga reebo daryeel la'aanta lo'da ee lo'da, waxay sidoo kale awood u yeelan kartaa in ay si madaxbannaan u soo saarto, iyada oo ubaahan baahida ugu yar ee aadanaha.
Sharafka weyn ee taranka ayaa sidoo kale ah xajin xasilooni ah oo lo'da, taas oo ay adagtahay in la arko markii ugu horeysay ee ka danbeeya aragtidooda adag iyo geeso waaweyn.
Waxay la wadaagi karaan dhibaatooyin la'aan meel la mid ah xayawaanka kale, iyo kuwa duurjoogta ah. Dagaal-yahankooda waxaa lagu muujiyay oo keliya xaalad khatar dhab ah iyo khatar ku ah nolosha.
Cows sidoo kale waxay leeyihiin dareen hooyo oo si fiican u horumarsan. Sababtoo ah taasi waxay tahay in wax soo saarka abuurka ah ee farcankiisa waa mid aad u sarreeya, maaddaama kiisaska dhimashada ee weylaha aan la heli karin.
Faa'iidooyinka caanaha: kakanaanta content
Faa'iidooyinka cilladani waa mid aad u adag in la dhagaysto, maadaama aysan jirin wax ficil ah. Dabcan, kuwani ma ahan lo'da oo aan ku caanbaxeyno inaan ku wargalinno caanaha, hase yeeshee faa'iido darradani waxay ka badan tahay magdhawga badan ee hilibka iyo baahida loo qabo daryeelka iyo quudinta.
Dhaqan ahaan qof kastaa wuxuu leeyahay fursad uu ku kiciyo yaryar oo ah cawska jilicsan ee reer hargabka, marka laga reebo dadka deggan cimilada hoose. Ka dib oo dhan, inkasta oo ay ku adkaysato adkeysigeeda wax kasta oo shuruud ah, sababtoo ah dhogor dheer, qaansarradu waxay ku dhacdaa kulayl aad u xun iyo qoyaan badan.
Sidaa darteed, xitaa haddii aad ku xiran tahay kuwan yaryar kuwan oo kale sababtoo ah muuqaal qurxoon, iyaga oo ku haynaya jawi kulul waxay noqon doontaa cadaab dhab ah oo iyaga u gaar ah, cunno iyo waxyaabo gaar ah ayaa ka caawin doona xayawaanka in ay ku noolaadaan.
Kakanaanta mawduuca ayaa sidoo kale been ka sheegaysa xaqiiqda ah in jinsigu yahay waxay u baahan yihiin xaddi badan oo dhul ah hab-nololeedyada iyo raadinta cuntada.
Taasi waa, xaaladaha caadiga ah ee barnadda iyo daaqsashada meelaha bannaan oo aan la ilaalin karin.
Sidoo kale waxaa si adag loo mamnuucay in lagu sii daayo meelaha qulqulayasababtoo ah waxay u horseedi doontaa kaliya in lumiyo tiro badan, iyo ma aha in iibsashada. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo lo'da this wanaagsan, ka dibna waxay noqon doonaan xataa si fiican loogu habeeyey jiritaanka meel bannaan, kordhiyaan wax soo saarka.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo ku saabsan quudinta lo'da.
Sifooyinka kale ee gaarka ah ee Woqooyiga
Diirad gaar ah waa in la bixiyaa si ku habboon ee ku habboon qadarinta Quarterland. Dhaqan ahaan, dhogorta ayaa leh midab madow. Hase ahaatee, waxaa jira shakhsiyaadka midabka lacagta ah, madow, grayish-brown ama xitaa huruud ah-bunni.
Inta badan, noocyada noocan oo kale ah oo aan caadi ahayn ayaa ku dhexjira dhex-dabeecadda. Suufkooda dhererkiisu aad buu u dheer yahay. Boobku wuxuu leeyahay dherer weyn, kaas oo u adeega sida ilaalinta cayayaanka.
Jidhkoodu sidoo kale waa wax aan caadi ahayn, maaha wax aan ka ahayn kuwa ay ka mid yihin nuucyada yaryar. Gaar ahaan, oo leh cabbirka jidhka oo aad u fiican, lugaha ee lo'da waa mid aad u yarinkastoo aad u xoogan.
Marka la eego xaaladaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah, arrintani waxay saameyn wanaagsan ku leedahay iswaafajinta jiritaanka ee buuraha iyo hooseeya. Mooskoodu waa gaaban yahay, godadkoodu aad ayuu u xoog badan yahay.
Maaddaama ay Jasiiradaha waaweyn yihiin wakiillo ka mid ah hilibka hilibka, muruqyada ayaa si aan wanaagsan loo horumarin. Qodobkani maahan mid aad u badan oo ku lug leh arrimo hidde ah, sida habka guuritaanka nolosha.
Nooc ka mid ah wax soo saarka ayaa ku dhici kara lo'da ee taranka la tilmaamay.
Inkastoo xaqiiqda ah in lo'da Highland ay ka tirsan yihiin nuucyada yaryar, iyada oo haynta lacag la'aan ah iyo saldhig cunto ku filan, dadka qaangaarka ah waxay awoodaan inay helaan miisaan aad u wanaagsan.
Sidaa daraadeed, qiyaasta celcelis ahaan hal lo'aad qaangaar ah ayaa ku kala duwan 450 illaa 550 kiiloogaraam, halka dibi ay xitaa gaari karaan 750 kiilogaraam. Sidaa darteed, waxqabadka hilibka ee caan this waa mid aad u sarreeya.
Lo'da waxay awoodaan inay bixiyaan faracii ugu horeeyay da'da 38-39 bilood, taas oo ah, sannadkii saddexaad ee nolosha. Isla mar ahaantaana, weylaha ayaa sidoo kale ku dhalan kara weynIyadoo miisaankeedu yahay 20 ilaa 25 kiilo garaam.
Saadaalinta hiddo-wadaha ee nolosha dheer waxay ka qayb qaadataa xaqiiqda ah in lo'da ay weli ku dhalan karto taranka xitaa 18 sano kadib. Laakiin, badanaa ujeedadaas waxaa loogu talagalay kaliya ilaa 10 sano, sababtoo ah lo'da aad u weyn ma noqon doonto mid ku haboon in lagu gowraco hilibka.
Da'da ugu wanaagsan ee lagu gowraco gawaarida waa 2-2.5 sano.
Ugu horreyn, waqtigaan mar hore waxay leeyihiin waqti ay ku helayaan tusmooyinka ugu sarreeya ee ay ka soo jeedaan, iyo marka labaad - hilibkooda da'adani waa tan ugu ballaadhan iyo nafaqo leh.
Marka la eego, hilibka Highland ayaa sidoo kale leh tiro badan oo faa'iido leh:
Dhadhamin fiican, taas oo ah waxoogaa dhadhanka ciyaarta.
In kasta oo xaqiiqda ah in hilibka sare ee hargabku leeyahay qiimo nafaqo wanaagsan, haddana waxay ku fiicnaaneysaa jirka bani-aadmiga.
Lafaha laga helo lo'da sarreeya waxaa loola jeedaa kooxahan hilibka ee ku jira xaddiga ugu yar ee dufanka. Tani waxay keenaysaa joogitaanka dhogor dheer oo ka ilaaliya xayawaanka qabow. Noocyada kale, lakabka hoose ee subagga ayaa barafka ka ciyaara doorka dhogorta.
Hilibkani wuxuu faa'iido u leeyahay dadka qaba cudurrada wadnaha, maxaa yeelay waxa ku jira heer aad u hooseeya ee kolestarool.
Hilibka hilibka ee caadiga ah ee Highlands ka horreeya borotiinka iyo macdanta birta.
Sidaa darteed, waxaa la soo gabagabeyn karaa in dayactirka iyo taranta ee cows-yar yar ee Cawsduurta Highland ay tahay shaqo aad u faa'iido leh oo sahlan.
Qaadashada raasumaalka bilawga ah ee iibsashada shakhsiyaadka jinsiga labka iyo dheddigga ah, iyada oo aanad lacag ku bixinayn cawska iyo dhisidda caleemaha, dhowr sano waxaad noqon doontaa wax ka badan lacagtii aad ku soo celin lahayd iibinta hilibka. Dakhliga wanaagsan wuxuu ku imaan karaa iibinta lo'da dhalinyarada.